Iziphepho zesikhala, izitha ezithule zoMhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Minyaka yonke, kokubili ePacific nase-Atlantic izivunguvungu (noma iziphepho, uma sise-Asia) zakha okungaba namandla amancane, ukuba namandla adingekayo okucekela phansi yonke into esendleleni yazo. Kepha, Yini ebingenzeka uma izivunguvungu zasemkhathini zihlasela uMhlaba?
Lokhu, yize kungaba (futhi, ngeke sikuphike, kufanele kube) yiphupho nje elibi, into engekho, ngeshwa ucwaningo luthi ngenye indlela. Akunakwenzeka, yebo, kepha kungenzeka ngemuva kwakho konke.
1 Ziyini iziphepho zasemkhathini?
2 Bazowuthinta kanjani umhlaba?
Ziyini iziphepho zasemkhathini?
Ukuqonda ukuthi zakhiwa kanjani, kufanele sikhulume ngeLanga noma, ikakhulukazi umoya welanga. Lolu hlobo lomoya lubangela ukuthuthuka kwe- Ukungazinzi kukaKelvin-Helmholtz. Ebizwa nangokuthi amagagasi kaKelvin noma amagagasi e-Kelvin-Helmholtz cirrus, kwenzeka lapho ukugeleza kwenzeka ngaphakathi koketshezi oluqhubekayo noma lapho kunomehluko wejubane kunqamula isikhombimsebenzisi phakathi koketshezi ezimbili.
Yize bekude ngaphezu kwamakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-500, uKatarina Nykyri, umcwaningi eFlorida Center for Space and Atmospheric Research, uveze ukuthi ingaveza ukuguquguquka kwama-ultra-frequency emigqeni yensimu kazibuthe yoMhlaba futhi ihlanganyele nezinhlayiya ezisebhaneni lemisebe.
Bazowuthinta kanjani umhlaba?
Iziphepho zesikhala ziyingozi yangempela kuma-satellite okuxhumana kanye nokuthunyelwa kwesikhala. Lezi »enye yezindlela eziyinhloko lapho umoya welanga uthwala khona amandla, isisindo nomfutho ungene ku-magnetosphere; ngenxa yalokhu, zithinta ukuthi amagagasi kaKelvin-Helmholtz akhula ngokushesha kangakanani nosayizi wawo. '
Ukungazinzi okubangelwa yi-plasma kuzokhipha amandla kazibuthe womhlaba, kukwazi dala amabhande wamandla ashisayo cishe amakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-67 ukusuka emhlabeni. Ukukhumbula lokhu, kubalulekile ukuqonda izindlela ezithinta ukukhula nezakhiwo zalezi zinto.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Iziphepho zesikhala, izitha ezithule zoMhlaba